DEGDEG: Gudoonka Barlamaanka Maamulka Galmudug oo uu ku guuleystay Musharax. – Kismaayo24 News Agency
DEGDEG: Gudoonka Barlamaanka Maamulka Galmudug oo uu ku guuleystay Musharax.
by admin 17th January 2020 0172
Waxaa goordhaw soo dhamaatay tirinta codadka Doorashada gudoomiyaha Baarlamaanka maamul goboleedka Galmuug, waxaana doorashada ku tartamayay labada Musharax ee kala ah Dr Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdinaasir Aadan Cusmaan .
Doorashada oo aheyd mid xamaasad gaar ah laheyd ayaa ugu dambeyn waxaa ku guuleestay Musharax Dr Maxamed Nuur Gacal oo helay codad gaaraya 54 halka musharax Cabdinaasir Aadan Cusmaan isna helay codad gaaraya 34-cod.
Waxaa goordhaw la filayaa in sidoo kale hoolka ka bilaabato Doorashada Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Baarlamaanka iyana ku tartamayaan labo Musharax oo saameyn badan ku dhax leh baarlamaanka Galmudug.
DAAWO: Hooyo Amran: Gabadhayda waxaa laba bil iga haysta ciidanka madaxtooyada.
Ciidanka Dowlada iyo kooxda Al shabaab oo ku dagaalamay deegaanka.
Sawirro: Kenya oo Askar badan looga dilay Qarax lala eegtay
admin 29th August 2018 29th August 2018
Taliyaaniga:- 743 qof oo kale oo hal maalin u dhimatay Caabuqa Coronavirus
Dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay ka mid noqoshada Golaha Xuquuqul Insaanka ee QM
admin 13th October 2018